एउटै खाेलामा दुई ओटा पक्कि पुलको निर्माण सम्पन्न हुँदै - chyordong.com
बैतेश्वर, ९ साउन । बैतेश्वर गाउँपालिकाकाे वडा नं ४ काब्रे बाट वडा नं ३ मिर्गे जाेडिने एउटै खाेलामा दुई ओटा पक्कि पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यार्सा खाेला पुल बैतेश्वर गाउँपालिका दाेलखा लाई पुर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपालचाेक बाट जम्मा मु अ क सहित रु. ३०५,४५,४१३.९३|- मा टेन्डर निकालिएकाे र श्री अन्जना/आर डि/अार एस जे. भी, काठमाण्डाैले जम्मा मु अ क सहित रु. २,४३,५६,३३७.२५|- मा सम्झाैता ०७७ मङ्सिर बाट काम शुरु गरेकाे थियाे । याे पुल निर्माण हुँदा मैनापाेखरि बगर गाेलाई यार्सा मजुवा हुँदै मिर्गे र काब्रे यार्सा हुँदै ठुलाेपातल लहरेमाने आवतजावतको लागि सहज भएकाे छ ।
त्यसै गरि सोही खोला अन्तरगत भस्मेखोला पुलको पनि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसबाट गैरिमुदि, मिर्गे र मजुवा हुँदै काब्रे तरेर गाउँ पालिकाकाे कार्यालय पाँडुडाँडा र मैनापाेखरि बजार आवतजावतकाे लागि सहज भएकाे छ । याे पुलकाे काम ॐ बुद्व कन्ट्रक्सनले ३बर्ष अगाडि सम्झाैता गरि हाल सम्पन्न गर्न लागेकाे हाे । याे पुल बैतेश्वर गाउँ पालिकाकाे रिङ राेड भित्र पर्दछ भने पुल तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउन स्थानिय, जनप्रतिनिधी , नागरिक समाज लगायतले समय समयमा ताकेता र चासो देखाउदै आएको छ । निर्माण कम्पनीले काेभिड -१९ काे कारण निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको भए पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।
यद्यपि दुबै पुलकाे मुख्य निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको तर प्रोटेक्सन वाल वा ग्याबिन भर्ने कार्यहरु समयमै नसकिएको हुँदा वर्षात काे मौसममा पहिराे बग्ने अथवा जमिन भास्सिएर संरचनामा असर पर्न सक्ने सम्भावना भएकाेले सम्बन्धित निकायकाे ध्यान बेलैमा जानु आवश्यक देखिन्छ ।